UWAFUMANA NJANI AMAGUMBI OKUXOXA ABAGQWESILEYO BEKIK UKUBA UJOYINE (2021) - ITHAMBILE
Uzifumana njani iiGumbi eziNgcono zeKik zokujoyina
Ukuncokola kwi-Intanethi ibiyindlela edumileyo yokunxibelelana, ngakumbi kulutsha nakwabantu abadala abancinci, kangangexesha elithile ngoku. Phantse onke amaqonga eendaba ezentlalo afana ne-Facebook, i-Instagram, i-Twitter, njl., Banendlela yabo yokuncokola. Injongo esisiseko yeziapps kukunceda abasebenzisi ukuba badibane nabantu abatsha, bathethe nabo, babe ngabahlobo, kwaye ekugqibeleni bakhe uluntu olomeleleyo.
Ungafumana abahlobo bakudala kunye nabantu oqhele ukubalahla, kwaye udibane nabantu abatsha abanomdla ababelana ngezinto ezifanayo, uncokole nabo (ngokukodwa okanye kwiqela), uthethe nabo emnxebeni, kwaye ubatsalele nevidiyo. Elona candelo lililo kukuba zonke ezi nkonzo zihlala zisimahla kwaye eyona nto ifunekayo kukunxibelelana okuzinzileyo kwi-intanethi.
Enye yezinto ezithandwayo zokuthumela imiyalezo nge-Kik. Yinkqubo yokwakha uluntu ejolise ekudibaniseni abantu abathanda izinto ezifanayo. Iqonga libamba amawaka amajelo okanye iiseva ezaziwa njengamagumbi okuxoxa e-Kik okanye amaqela e-Kik apho abantu banokuxhoma khona. Xa uba yinxalenye yegumbi lokuncokola le-Kik, unokunxibelelana namanye amalungu eqela ngombhalo okanye ngomnxeba. Umtsalane ophambili we-Kik kukuba ikuvumela ukuba uhlale ungaziwa ngelixa uncokola nabanye abantu. Oku kuye kwatsala izigidi zabasebenzisi abathanda umbono wokuba bakwazi ukuthetha nabantu abangabaziyo abathandanayo malunga nezinto abanomdla kuzo ngaphandle kokuveza ulwazi lomntu.
windows 10 chrome akukho sandi
Kule nqaku, siza kuthetha ngeli qonga likhethekileyo kwaye limangalisayo ngokweenkcukacha kwaye siqonde ukuba isebenza njani. Siza kukunceda ufumanise ukuba uqalise njani kwaye ufumane amagumbi chat Kik ukuba ezifanelekileyo kuwe. Ukuphela kweli nqaku, uya kwazi ukufumana amaqela Kik kwaye uya kuba yinxalenye ubuncinane enye. Ke, ngaphandle kokulibaziseka, masiqale.
Uzifumana njani iiGumbi eziNgcono kakhulu zeNgxoxo zeKik
Ngawaphi amagumbi chat Kik?
2 Iindlela Fumana Best Amagumbi Chat Chat
Indlela ye-1: Fumana amagumbi okuxoxa eKik usebenzisa icandelo lokuHlola elakhelweyo
Indlela yesi-2: Fumana amagumbi okuxoxa eKik ngokusebenzisa ezinye iiWebhusayithi kunye nemithombo ekwi-Intanethi
Uyenza njani iQela leKik eNtsha
I-Kik yinkqubo yemiyalezo yasimahla ye-intanethi ephuculwe yinkampani yaseCanada eKik enxibelelana. Iyafana kakhulu neeapps ezinje ngeWhatsApp, iDiscord, iViber, njl. Ungasebenzisa iapp ukunxibelelana nabantu abathanda izinto kunye nokusebenzisana nabo ngeetekisi okanye iifowuni. Ukuba ukhululekile, unokukhetha iifowuni zevidiyo. Ngale ndlela unokuza ubuso ngobuso kwaye wenze ubudlelwane nabantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.
Ujongano lwayo olulula, amanqaku egumbi lokuxoxa eliphambili, isikhangeli esakhelweyo, njl., Yenza i-Kik iapp eyaziwayo. Uya kumangaliswa kukwazi ukuba usetyenziso lukhona phantse iminyaka elishumi kwaye lungaphezulu kwe-300 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, esinye sezizathu eziphambili zempumelelo yaso kukuba ivumela abasebenzisi ukuba bagcine ukungaziwa. Oku kuthetha ukuba unganxibelelana nabantu ongabaziyo ngaphandle kokukhathazeka ngemfihlo yakho. Enye into enomdla malunga ne-Kik kukuba malunga ne-40% yabasebenzisi bayo ngabakwishumi elivisayo. Nangona usenako ukufumana abantu abangaphezulu kweminyaka engama-30 ubudala kwi-Kik, uninzi lungaphantsi kweminyaka eli-18 Ngapha koko, iminyaka esemthethweni yokusebenzisa i-Kik yi-13 nje, ke kuya kufuneka ulumke kancinci ngelixa uncokola njengoko kunokubakho abantwana abangaphantsi kweqela elinye. Ngenxa yoko, i-Kik igcina ikhumbuza abasebenzisi ukuba bagcine imiyalezo ye-PG-13 kwaye balandele imigangatho yoluntu.
Ngaphambi kokuba sifunde indlela yokufumana amagumbi okuxoxa e-Kik, kufuneka siqonde ukuba zisebenza njani. Ngoku igumbi lengxoxo le-Kik okanye iqela le-Kik ngokusisiseko lijelo okanye iseva apho amalungu anokusebenzisana khona. Ukubeka ngokulula, liqela elivaliweyo labasebenzisi apho amalungu anokuthetha kunye. Imiyalezo ethunyelwe kwigumbi lokuncokola ayibonakali kuye nabani na ngaphandle kwamalungu. Ngokwesiqhelo, la magumbi okuncokola enza abantu ababelana ngezinto ezifanayo njengomdlalo weTV owaziwayo, incwadi, iimuvi, indalo yokuhlekisa, okanye baxhasa iqela elifanayo lebhola.
Ngalinye lala maqela lilawulwa ngumseki okanye umphathi oqale iqela kwasekuqaleni. Kwangoko, onke la maqela ayebucala, kwaye unokuba yinxalenye yeqela kuphela ukuba umlawuli wongeze kwiqela. Ngokungafaniyo ne-Discord, awungekhe uchwetheze nje i-hash yeserver kwaye ungene kuyo. Nangona kunjalo, oku kutshintshile emva kohlaziyo lwamva nje, olwazisa amagumbi okuncokola esidlangalaleni. I-Kik ngoku inento ekuzingelayo ekuvumela ukuba ukhangele amagumbi okuncokola esidlangalaleni onokuthi ujoyine. Makhe sixoxe ngoku ngokweenkcukacha kwicandelo elilandelayo.
Funda kwakhona: Ungazikhuphela njani iividiyo kwiNgxwabangxwaba
Kukho iindlela ezimbalwa zokufumana amagumbi wengxoxo Kik. Ungasebenzisa nokuba ukhangelo olwakhelwe-ngaphakathi kunye nokuphonononga inqaku le-Kik okanye ukukhangela kwi-Intanethi kumagumbi okuxoxa awaziwayo kunye namaqela. Kweli candelo, siza kuba sixoxa ngazo zombini ezi ndlela ngeendlela.
Inye into ekufuneka uyikhumbule kukuba onke la magumbi okuncokola anokunyamalala nangaliphi na ixesha ukuba umseki okanye umphathi ugqiba kwelokuba alichithe iqela. Ke ngoko, kuya kufuneka ukhethe ngononophelo kwaye uqiniseke ukuba ujoyina esebenzayo kunye namalungu anomdla notyalomali.
Zonke ii -apps ezilahlekileyo windows 10
Xa usungula i-Kik okokuqala, awuyi kuba nabahlobo okanye unxibelelwano. Yonke into oza kuyibona yingxoxo evela kwiQela Kik. Ngoku, ukuze uqale ubudlelwane, kufuneka ujoyine amaqela, uthethe nabantu kwaye wenze abahlobo onokuthi ube nabo kwincoko enye. Landela la manyathelo anikwe apha ngezantsi ukuze ufunde indlela yokufumana Kik amagumbi engxoxo.
1. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukucofa indawo kwi Phonononga Amaqela Oluntu iqhosha.
Ungacofa kwakhona kwi Plus icon kwikona esezantsi ekunene kwesikrini kwaye ukhethe ifayile ye- Amaqela oLuntu ukhetho kwimenyu.
3. Uya kubuliswa ngo wamkelekile umyalezo wokwazisa kumaqela oLuntu . Ikwanayo nesikhumbuzo sokuba kuya kufuneka ugcine imiyalezo PG-13 kwaye ulandele iMigangatho yoLuntu .
4. Ngoku, thepha kwi Ndiyifumene iqhosha, kwaye oku kuya kukusa kwifayile ye- hlola icandelo lamaqela oluntu.
5. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, izingxoxo zeqela le-Kik ziiforamu zabantu abathanda izinto ezifanayo ababelana ngezinto ezifanayo Iimuvi, imiboniso, iincwadi, njl . Ke ngoko, zonke izingxoxo zamaqela e-Kik zinxulunyaniswe nee-hashtag ezifanelekileyo.
6. Oku kwenza ukuba kube lula kumalungu amatsha ukufumana iqela elililo ngokukhangela amagama aphambili ane-hashtag phambi kwabo. Umzekelo, ukuba ungumdlalo weTrones fan, emva koko unokukhangela #Imidlalo yeethrone kwaye uyakufumana uluhlu lwamaqela oluntu apho uMdlalo weZihlalo ziingxoxo ezishushu.
7. Uya kuba sele uzifumanisile ezinye ii-hashtag ezigqogqwe kakhulu njenge DC, Marvel, Anime, Gaming, njl. , esele zidwelisiwe phantsi kwebar yokukhangela. Unga ngqo cofa kuyo nayiphi na kuzo okanye khangela i-hashtag eyahlukileyo ngokwakho.
8. Nje ukuba ukhangele i-hashtag, i-Kik iya kukubonisa onke amaqela ahambelana ne-hashtag yakho. Unokukhetha ukuba yinxalenye yayo nayiphi na kubo ukuba babengekabusebenzisi ngokupheleleyo ubungakanani babo (amalungu angama-50).
9. Ngokulula cofa kubo ukujonga uluhlu lwamalungu emva koko ucofe iqhosha Joyina iQela loLuntu iqhosha.
10. Ngoku uza kongezwa kwiqela kwaye ungaqala ukuncokola kwangoko. Ukuba ufumanisa ukuba iqela liyadika okanye alisebenzi, ungashiya iqela ngokuthepha kwi Shiya iqela iqhosha kuseto lweqela.
chrome ayisebenzi emva kohlaziyo
Ingxaki ngendlela edlulileyo kukuba icandelo lokuHlola libonisa ukhetho oluninzi kakhulu onokukhetha kulo. Maninzi kakhulu amaqela kangangokuba kuye kubenzima ukugqiba ukuba leliphi. Uninzi lwexesha, uphela uphela kwiqela elizaliswe zii-weirdos. Kwakhona, kukho amawaka amaqela angasebenziyo aya kubonakala kwiziphumo zophando, kwaye unokugqibela ngokuchitha ixesha elininzi ukhangela iqela elilungileyo.
Ngombulelo, abantu bayifumene le ngxaki kwaye baqala ukwenza iiforamu ezahlukeneyo kunye neewebhusayithi ezinoluhlu lwamaqela eKik asebenzayo. Amaqonga eendaba ezentlalo afana neFacebook, iReddit, iTumblr, njl., Ikwayimithombo elungileyo yokufumana awona magumbi okuncokola eKik.
Uya kufumana iqela elizinikeleyo leReddit eliya kwi-subreddit r / Kik Amaqela leyo yenye imithombo engcono ukufumana amaqela Kik umdla. Unamalungu angaphezu kwe-16,000 yamalungu aquka onke amaqela obudala. Unga lula ukufumana abantu ukuba babelane umdla ofanayo, thetha nabo uze ubabuze Kik iingxoxo kwigumbi lengxoxo. Yiforum esebenzayo kakhulu apho amaqela amaKik amatsha ongezwayo rhoqo. Ngaphandle kokwahluka kwakho kukungafani, ngokuqinisekileyo uya kulifumana iqela elifanelekileyo kuwe.
Ngaphandle kweReddit, unokujika uye kuFacebook. Inamawaka ngamaqela asebenzayo asebenza ngokuzinikela ekuncedeni ufumane igumbi lokuncokola le-Kik elungileyo. Nangona ezinye zazo zingasasebenzi emva kokungeniswa kwamagumbi okuncokola esidlangalaleni e-Kik kunye nokubuya kwenqaku lokuKhangela, usenokufumana uninzi olusebenzayo. Abanye bade babelane ngamakhonkco kumaqela abucala kunye nekhowudi ye-Kik, ekuvumela ukuba uzijoyine njengoluntu.
Unokukhangela kuGoogle Amagumbi chat Kik , Kwaye uza kufumana ezinye izikhokelo ezinomdla eziza kukunceda ufumane amaqela e-Kik. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, uya kufumana uluhlu lweewebhusayithi ezininzi ezibamba amagumbi okuxoxa eKik. Apha, uya kufumana amagumbi chat Kik ukuba ezifanelekileyo iimfuno zakho.
Ukongeza kumaqela oluntu avulekileyo, unokufumana uninzi lwamaqela abucala kumaqonga eendaba ezentlalo nakwiiforamu ezikwi-Intanethi. Uninzi lwala maqela lukhawulelwe ubudala. Ezinye zazo zenzelwe i-18 nangaphezulu ngelixa ezinye zinikezela kubudala obuphakathi kwe-14-19, 18-25, njl.njl. . Kwimeko yeqela labucala, kuya kufuneka ufake isicelo sobulungu. Ukuba ugcwalisa zonke iikhrayitheriya, umlawuli uya kukubonelela ngekhowudi ye-Kik, kwaye uya kuba nakho ukujoyina iqela.
Ukuba awonelisekanga ziziphumo zokukhangela kwaye awufumani qela lifanelekileyo unokuhlala uzenzela elakho iqela. Uya kuba ngumseki kunye nomphathi weli qela, kwaye ungamema abahlobo bakho ukuba bajoyine okufanayo. Ngale ndlela, awusayi kuphinda ukhathazeke ngemfihlo yakho. Kuba onke amalungu ezihlobo zakho kunye nabantu obaqhelileyo, awuzukuba naxhala malunga nokuhambelana. Konke okufuneka ukwenze kukulandela amanyathelo anikezwe apha ngezantsi ukwenza iqela elitsha le-Kik. La manyathelo aya kukunceda udale iqela elitsha loluntu kwi-Kik.
1. Okokuqala, vula ifayile ye- I-WHO usetyenziso kwifowuni yakho.
2. Ngoku, cofa kwi Plus icon kwikona esezantsi ekunene kwesikrini uze ukhethe ifayile ye- Iqela loluntu ukhetho.
3. Emva koko, thepha kwi Plus icon kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
4. Ngoku, kufuneka ufake igama leli qela lilandelwe yithegi efanelekileyo. Khumbula le thegi izakuvumela abantu ukuba bakhangele iqela lakho, ke qiniseka ukuba ibonisa ngokufanelekileyo umxholo wesifundo okanye isihloko sengxoxo kweli qela. Umzekelo, ukuba ufuna ukwenza iqela lokuxoxa ngothotho lweWitcher emva koko dibanisa ' Witcher ’Njengethegi.
mic iyekile ukusebenza emva kohlaziyo lweWindows
5. Unokuseta kwakhona bonisa umfanekiso / iprofayile yeqela.
6. Emva koko, unako qala ukongeza izihlobo nabafowunelwa beli qela. Sebenzisa ibar yokukhangela ezantsi ukujonga abahlobo bakho kwaye ubongeze kwiqela lakho.
7. Wakuba wongeze wonke umntu obumfuna, cofa u Qalisa iqhosha ukuya yenza iqela .
8. Yiyo leyo. Ngoku uya kuba ngumseki wegumbi elitsha lokuncokola le-Kik.
Ungayikhawulezisa njani iXfinity WiFi Hotspots
Izixhobo ezi-8 eziGqwesileyo zeNgcono zeNgcaciso
Izixhobo ezi-9 eziNgcono zeNgcaciso yeVidiyo (2021)
Ungabelana njani ngeNdawo yakho nabahlobo bakho kwi-Android
Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye ubekwazi ngokulula fumana amanye amagumbi okuncokola aphezulu e-KIK ukuze ujoyine . Ukufumana iqela elifanelekileyo labantu onokuthetha nabo kunokuba ngumceli mngeni, ngakumbi kwi-intanethi. I-Kik yenza lo msebenzi ubelula kuwe. Ibamba amagumbi okuncokola esidlangalaleni kunye namaqela apho abantu abathanda izinto ezifanayo banokunxibelelana. Konke oko ngelixa uqinisekisa ukuba ukhuseleko lwakho luyimfihlo. Emva kwayo yonke loo nto, nokuba bayawuxabisa kangakanani umboniso weTV owuthandayo, abasemzini kwaye ke ukugcina ukungaziwa kuhlala kuyinto ekhuselekileyo.
Siyakukhuthaza ukuba usebenzise Kik ukwenza abahlobo abatsha kodwa nceda uxanduva. Soloko ulandela izikhokelo zoluntu kwaye ugcine engqondweni ukuba kunokubakho ulutsha olufikisayo kwiqela. Qiniseka ukuba awabelani ngolwazi lomntu siqu njengeenkcukacha zebhanki okanye iinombolo zefowuni kunye needilesi zokukhusela. Siyathemba ukuba kungekudala uza kufumana ubudlelane bakho kwi-intanethi kwaye uchithe iiyure uphikisana ngesiphelo seqhawe lakho olithandayo.
Imiba ye iTunes ngeewindows 10
windows igcina ukufaka uhlaziyo olufanayo
windows 10 fakela ku 99
windows 10 1709 ayizukufaka
windows 10 uhlaziyo ngo-1903 lubambekile
windows 10 ngokungacwangciswanga unqamla kwi-intanethi